Machadka McKnight wuxuu ku faraxsan yahay inuu ku dhawaaqo in Ben Passer uu ku biiri doono Cilmi-badeedka & Tamarta Midwest barnaamijka sarkaal sare ee barnaamijka. Passer waa aqoon yahan ku takhasusay siyaasada tamarta waana khabiir la aqoonsan yahay oo ku saabsan sinaanta cimilada iyo cimilada Minnesota. Wuxuu bilaabi doonaa doorkiisa cusub bisha Sebtember 14.
"Waxaan ku faraxsanahay inaan Ben ku soo biirno kooxdeena, oo aan sii ballaarinayno awoodeena maadaama McKnight uu ka shaqeynayo dhimista kaarboonka cajiibka ah sanadka 2030," ayay tiri Sarah Christiansen, oo ah agaasimaha barnaamijka Cimilada. “Ben wuxuu keenayaa rabitaan aan leexleexad lahayn oo u heellan xallinta dhibaatada cimilada iyo wax ka qabashada sinnaanta jinsiyadda ee ku aaddan xallinta cimilada. Firfircoonidiisa, ruuxiisa wadashaqeyn, iyo aragtidiisa istiraatiijiyadeed waxay u adeegi doontaa la-hawlgalayaashayada si wanaagsan annagoo ka wada shaqeyna sidii loo dardargelin lahaa waxqabadka cimilada xilligan muhiimka ah. ”
Adkaysiga Ben, ruuxda iskaashiga, iyo himilada istiraatiijiyadeed waxay u adeegi doontaa la-hawlgalayaashayada sidoo kale waxaan ka wada shaqeyneynaa inaan dardar galino waxqabadka cimilada waqtigan muhiimka ah. —SARAX KRISTIANSEN, CIMILADA DHEXE & AGAASIMAHA BARNAAMIJKA Tamarta
Barnaamijka Cimilada & Tamarta ee Midwest wuxuu diiradda saarayaa wax ka beddelka nidaamka tamarta, koronto dhalinta gaadiidka iyo dhismayaasha, iyo kalagoynta kaarboonka dhulka shaqeeya ee Midwest. Marka laga soo tago Christiansen, kooxda Cimilada waxaa ka mid ah saraakiisha barnaamijka ee Brendon Slotterback iyo Tenzin Dolkar, oo ah maamulaha kooxda barnaamijka Kelsey Johnson, iyo barnaamijka iyo deeqaha la shaqeeya Sam Marquardt. Passer wuxuu kormeeri doonaa oo horumarin doonaa xayeysiisyo deeqo muhiim ah oo taageera dadaallada lagu dhisayo awoodda iyada oo loo marayo iskaashiyo, la waafajiyo cimilada McKnight iyo yoolalka sinnaanta si loo hormariyo xalka dhibaatada cimilada.
Ku hogaaminta Natiijooyinka Tamarta Nadiifnimada
Passer wuxuu u yimaadaa McKnight laga bilaabo Tamarta Cusub, halkaas oo uu u jiheeyo shaqada helitaanka tamarta ee xaqiijisay natiijooyinka sharciyeynta iyo isbeddelka siyaasadeed ee Xarunta Gobolka. Fresh Energy waa hay'ad madax banaan oo ku shaqeysa siyaasada tamarta ee Saint Paul, Minnesota oo ka shaqeysa dardar galinta u gudubka dhaqaalaha tamarta nadiifka ah.
Lixdii sano ee la soo dhaafay, Passer wuxuu ka shaqeynayay arrimo la xiriira waxtarka tamarta, tamarta la cusbooneysiin karo, iyo koronto dhalinta waxtarka leh, iyadoo xoogga la saarayo sida dhammaan arrimahan ay u dhexgalaan sinnaanta jinsiyadda iyo caddaaladda deegaanka. Waxaa xusid mudan, inuu horseed ka ahaa abuurista iyo koritaanka barnaamijka Fresh Energy ee Helitaanka Tamarta iyo Sinaanta, wuxuuna hogaamiyaa kaladuwanaanta, sinaanta, ka mid noqoshada, iyo dadaallada ka dhanka ah cunsuriyadda. Doorkiisa haatan ee agaasimaha hogaaminta, wuxuu kormeerayaa istiraatiijiyadda muhiimka ah ee Fresh Energy si loo hubiyo kala-guurka tamarta caddaaladda iyo sinnaanta, wuxuuna u adeegaa sidii qof dhibic ka ah sinnaanta tamarta ee hay'adda sharci dejinta, sharciyeynta, iyo u doodista.
Qareen sharciyeysan oo xubin ka ah Qareenka Minnesota, Passer wuxuu horseeday dadaallada iskaashi ee lala yeesho la-hawlgalayaasha kala duwan iyo xulafada si loogu raro Minnesota dhanka dhaqaalaha, dhexdhexaad kaarboon-kaarboon. Wuxuu soosaaray iskaashi lagu kalsoon yahay ururada maxalliga, gobolka, gobolka, iyo qaranka, waxaana lagu casuumay inuu la wadaago shaqadiisa goobo badan oo ay ka mid yihiin Waaxda Tamarta Mareykanka iyo Waaxda Mareykanka ee Guryeynta iyo Horumarinta Magaalooyinka.
Passer wuxuu heystaa bachelor-ka farshaxanka ee sayniska siyaasadeed ee Jaamacadda Minnesota iyo dhakhtar sharci oo ka socda William Mitchell College of Law (hadda Mitchell Hamline School of Law). Wuxuu hadda u shaqeeyaa gudoomiye ku xigeenka guddiga Cimilada Cimilada: Hantida Xayawaanka ee Will Steger wuxuuna ku jiraa guddiga qaranka ee Beddelka GRID.